Dhaabbilee Gargaarsa: Baqattoota Eertiraa kaambi baqaa Tigraayiti qabanii miidha hamtuu irraan gahann biyyatti deebisun seera addunyatii ala
Muddee 23, 2020
FILE - Eritrean refugees wait to get registered on arrival at the Indabaguna refugee reception and screening center in Tigrai region near the Eritrean border in Ethiopia, Feb. 9, 2016.
Dhaabbilee Gargaarsaa:Haalii baqattootii Eertiraa Tigraay keessaa humnaan qabamanii miidhaa hamaa irraan gahanii biyyatti keesaa baqatanittiin deebisan seera addunyaatii ala.
Akka gabaasa gara garaatti lola Sadaasaatiin duratti baqattoota Eeritraa kuma 96 tahanitti kaambii baqaa Tigraay afur keessa jiraata.Lola naannoo Tigraay jalqabee jennaan kaan Suudanitti kaan ammoo Finfinneetti dheete.
Refugees Internatinal, dhaaba baqataa addunyaatii dhaabate.Akka gabaasaa isaaniitti nama Eeritaa walti marsanitti kaan lafa lolaa Tigraaytti kaan ammoo biyya isaaniitti fa’an.Baqataa Eertiaa biyya innii keessaa baqatetti irreen deebisuun afaan balaa buus,jetti Saaraa Miller,bulchiinsa olaanaa Refugee International keessaa
Itoophiyaa ykn lafa lolatti jiran Tigraay,ykn ammoo Eertiraa lafa jarii keessaa baqatellee taanaan jara kana achitti raruun balleessaa seera addunyaatiin gugurdaan keessaa tokko, jettee VOAtti himte
Akka jecha isiitti rakkoo tana baqataa, maatii baqataatii fi dhaabbilee mootummaa hin tahin irraa dhagahuutti jiran.
Stijn Vercruysse, gabaasaa media biyya Beljiyeem,VRT NWS hojjatu.Nama Eertiaa kaambii baqaa Tigraay Shimbelaa baqatee Shiraaroo deemuutti jiru karaa irratti oduu irraa fuudhe. Akka jecha gaazexeessaa kanaatti baqataa haga tokko humnumaan Eertiraatti raran.Nama haga tokko qawween giddeessee makiinaatti guurrata.
Chris Melzer, dhaaa gargaarsaa baqataa Tokkummaa Motumootaatti garee gargarsa muddamsuu damee Itophiyaa keessa hojjata.
Akka innii VOAtti email himnetti miilota isaa ammallee kaambii baqaaa Tigraay afur dhaquu hin eeyymaniif.Taatullee kaambii baqaa lamatti midhaanii fi gargaarsa qooduufiitti jiran.
Wannii baqataa tolchuutti jiran akka jecha isaatti waan guddoo fuula hamtuuti. “Kaambii baqaatii guuranii nama ijjeesuutti jiran,humnaan achii nama guuruutti jiran jechaa dhageenna tun waan nama yaaddesaati jedha,” Chris.
Tun mirkana taanaan seeraa addunyaatii ala taatullee dharaa dhugaa dubbii tana qorachuu hin dandeennu jedha.
Rakkoon tun bulchoota Amerikaallee yaaddessuutti jirti.Seneterii (D-NJ) paartii Demokriaati Cory Booker fi Sen. Todd Young(R-IN) warrii wal hadhu nama nagaa eegee lola duraa baqachiisuu qaba jedhan.
“Baqatttoota Eertiraa Itoophiyaa keessatti fixan jedhanii dhagauutti jirra,waraanii Eertiraa baqataa qaqqabee irreen Eertiraatti raruutti jiraa dhagahuutti jrra tun waan akka malee nama yaaddessaa,” jedhan.
Hagii tokko lola duraayyuu baqachuu dhowwan jedhani barreessaan seneterootii tun lamaan.Akka gabaasa bahuutit jiruutti waraanii Eeritrraalleen lola Tigraay keessa jira.
Diplomaatotii shan akka waraanii Eeritaa lola sun keessa jiru footoo saatelaayitii irraa argataniin, odeeffannoo jidduutti qabataniinii oduu Tigraayii argtanii mirkansan jedhan,akka oduu Reutersitti.
Waraanii Eertiraa lola jedhan kana keessa jiraachuu isaa oduu mirkansitutti jira tun waa akka malee hamtuuti,akka gabaasa oduu himaa minsiera haajaa alaatti.
Ministrtii haajaa alaa Amerikaa waraanii akkas ariitiin acii bahu malee jedhe gaafate.Ministerii kun akka warrii lola sun keessaa qooda qabu cuftii seera addunyaa mirga namaatin eeguuf baafatte ulfeessuu male akka oduu ministera haajaa alaatti.
"Oduu himaan minsitera haajaa alaa Amerikaa mootummaa isaanitii fi jaallewwan isaanii addunyaa keessa jiran akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratanii warra balleessaa qabullee gaafatan mudduutti jabeessanii gaafatan jedha.
Akka baqataa eegan,nagaan deebi’u,dhowwaa malee namii Tigraay gargaarsa isaa male argatu gaafanna jedhan.
Taatullee ministerii odeeffannoo Eertiraa,Yemane Gebremeskel, waan baqattoota Eeritriraa Tigraay keessatti dhibiittu jiraa Tokkummaa Mootummootaatti itti gaafatama jedha.
“Haga ganna kurnya lamaatii oli UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kennitee gattee seera ummata Eeriraatiin diqqeessu baafatee hojjachaan baate jedha Yemane ergaa Twwiter ji’a dabre barreesseeen.
UNHCR tana maleellee duula maqaa balleessuutit duule jedha oduu himaan kun.Redwan Hussien,oduu himaan moootummaa Itoophiyaati.Eegii garee Tokkummaa Mootummootaatti dhukaasanii asi akka fedhan naannoo keessa deemuun hin taatu jedha.
“Lafa keessaa deemuun hin taatu jedhanitti jira jedhee Muddee keessaa Rooytesitti hime.Adoo beekanuu keessa ufi buusan jedha.
Akka dhaaba baqataa addunyaa Refugee International keessaa,Miller jedhetti jireennii baqataa kaambii Tigraay keessaa waan akka malee hamaati.
Nyaata,qorsa,gaazii fi waan hedduutti barbaachisaaf.Namii midhaanii fi gargaasa barbaada kaambii keessaa yaahuutti jiraa jetti.Warrii miilaan baqatulleen gargarsa argachu male jetti.
Akka dhaaba baqataa gargaaru Refugee international jedhetti namii lubbuun baqatu gara fedhe baqachuu qaba lafa keesaa baqatanitti irreen deebisuu hin qaban warra Eeritaa baqatelleehumnaan qabanii achitti raruun waan akka malee nama yaaddessaati jedha.